Vakaremara vakawana zvishamiso pamawheelchair avo Karman® Mawiricheya
Wese munhu ane nhamo dzaanosangana nadzo muhupenyu hwake asi kwete sevanhu vese vakaremara. Zvinotora yakawanda yekuda simba uye hushingi ku kusunda kumberi uye ita basa rinodiwa. Zvizhinji zvinoda zvizhinji simba uye hunhu husina kutya kuenda kure. Handicaped vanhu vakaremara vanomanikidzwa kushanda zvakanyanya kupfuura vazhinji, uye kubudirira kwavo kunobva munzvimbo ine simba guru uye ushingi. Vanhu vanoda mavhiripu yezvakasiyana zvinhu, uye pakupedzisira, zvinoita zvirinani pane kukuvadza kwavari. Pamwe nekubatsira kufamba, mumwe wiricheya inobatsira nehutano hwevashandisi uye unhu yehupenyu nekubatsira mukukunda kumanikidza maronda uye kufambira mberi kwekuremara uku zvakare uchivandudza kufema uye kugaya.
Inonyanya Kukurudzira uye Inozivikanwa Wiricheya Mushandisi
Kubva kumasayendisiti uye maECOs kune vatambi nevatambi, vanhu vazhinji vakunda uye vakabudirira mune yavo mavhiripu. Takanyora pasi humwe hunhu hwakakurumbira.
Zvakawanda kupfuura mazita ezveKunze Kwakasiyana ne Stephen Hawking, Stephen Hawking ndomumwe we, kana asiri iye, anozivikanwa kwazvo masayendisiti munyika. Akange achikwanisa kubudirira mukubudirira kwake kwese uye zvaakawana kunyangwe akaonekwa aine ALS pazera ramakore makumi maviri nerimwe.
Aingogona kutaura chete kushandisa komputa yake uye anga ave akazara-nguva Powerchair-mushandisi zvichitevera ma1980. Yake kuremara hazvina kumudzivisa kubva pakurega pane chake chishuwo chekudzidza zvese, kunyanya mashandiro ehukama hwakawanda uye huwandu hwevanamakanika. Nhoroondo Pfupi yeNguva, rimwe remabasa ake akanakisa, rakagara paSvondo Times vatengesi vevatengesi kwemavhiki angangoita 237.
Nguva yekupedzisira Christopher Reeve, murume anozivikanwa nekutamba Murume weSimbi Superman, aive mumwe wevatambi vane mukurumbira muma90s. Munguva yemakwikwi evatambi muna Chivabvu 1995, Reeve akavhuna mutsipa wake izvo zvakamupa iye munhu ane quadriplegia. Tsaona iyi yakakonzera kutyora kweC1-C2 cervical vertebrae uye kwakamukuvadza Musipinha tambo, ndokumusiya achivimba nemuchina wekufema. Mushure mekurapwa kwakawanda, Reeve akazova kumeso kweruzhinji Musipinha cord kuipa uye zvakare muratidziri weSCI yekutsvaga. Akakurudzira masayendisiti pasi rese kutsvaga mushonga uye kutsvaga nzira nyowani dzekuvandudza iyo unhu yehupenyu hwevanhu vane Musipinha tambo kukuvara. Pamwe chete nemukadzi wake Dana, Reeve akatanga iyo Christopher Reeve Foundation iyo inotsvaga mari uye inoshanda semutsigiri weiyo Musipinha cord kuipa vemunharaunda.
Ralph Braun ndiye akagadzira Braun Corporation, mumwe wevatungamiriri vavaki ve wiricheya kufambidzana motokari. Akange anzi "mutsigiri weshanduko" neMutungamiri Barack Obama. Aive munhu aifarira kuunza rusununguko rwe kufamba to Handicaped vanhu.
Ralph aive nemuscular dystrophy paakazvarwa uye akatanga basa rake muna 1966, kwaakagadzira yekutanga-inodzorwa nemaoko. wiricheya-kufambidzana van. Gare gare muna1991, kambani yaRalph, BraunKugonesa, Yakagadzira yekutanga nyore kufambidzana minivan. kungofanana nevamwe vazhinji Handicaped vanhu.
John Hockenberry ane Musipinha cord kuipa izvo zvakamusiya mu wiricheya. Kunyangwe izvo, iye mutori venhau weAmerica uye munyori, katatu-nguva Peabody Award anokunda uye mana-nguva Emmy Mubayiro. Akashanda muDateline muma1990 uye akazove mumwe wevatapi venhau vekutanga kushandisa a wiricheya paAmerican network. Ndiye zvakare munyori webhuku. Kufamba Kutyora: War Zones, Mawiricheya, neDeclarations of Independence, uye zvakare anga ari nhepfenyuro yeThe Takeaway, live nhau dzenyika chirongwa paPublic Radio kubvira 2008.
wiricheya Vashandisi Vakatikomberedza Ivo Vanoramba Kuderedzwa Pasi sevamwe Handicaped vanhu.
Ikoko zvakare kwave kune yakawanda mienzaniso yevasina-mukurumbira vanhu vakafuridzira uye vakagadzira nzira dze mumwe wiricheya vanhu.
● Chelsie Chikomo
Imwe yacho inosanganisira inoshuvira nyaya yemukadzi mu wiricheya asina kumbokanda pane zvido zvake. Uyu musikana mudiki weCalifornia akaita tsaona yemotokari mugore rake repamusoro rekusekondari izvo zvakamusiya T10 akaremara. Asi izvo hazvina kumutadzisa kutevera hope dzake uye akaramba ari munhu akasindimara waakange agara ari uye achiedza kuburikidza nezvake zvaaitarisirwa.
Chelsie Chikomo anga ada kutamba kubva kubvira aine makore matatu ekuberekwa. Mushure menjodzi yemotokari inosiririsa pazera remakore gumi nemanomwe, iye akasara nemuviri wepasi usingafambi. Asi izvo hazvina kumutadzisa.
Pamwe chete nababa vake, Gomo rakatanga kufamba kusingabatsiri Walk uye Roll Foundation kukurudzira vamwe vanhu vari mumamiriro akafanana. Akabatsira kuunganidza mari ku kupa mawiricheya kune avo vanoda rubatsiro.
Chelsie Hill ane makumi maviri neshanu zvino uye akabudirira kugadzira imwe yeakakurumbira pasi rese wiricheya yekutamba mapoka, maRollettes. Iri boka rine vakadzi vatanhatu mu mavhiripu vanoda kutamba uye nekuparadzira tariro kunharaunda yavo.
● Jerry senge vamwe vese Handicaped vanhu
Jerry anozvimiririra-wemakore makumi mashanu nemapfumbamwe baba vevana vana. Iye anozvimirira, ane imba, akarera mhuri, uye vana vake vakuru vachiri kutarisa kwaari kuti vamutsigire. Akave nazvo kuremara kweanopfuura makore makumi matatu nemashanu kubva mutsaona yakamusiya semunhu akaoma mitezo. Asi akaramba kutsanangurwa nezvake kuremara uye anokwikwidza uye varairidzi mumitambo yakati wandei akatotora chikamu muBoston Marathon.
"Pane zvakawanda zvandinogona kuita, uye kune zvimwe zvinhu zvandisingakwanise kuita," akadaro Jerry. “Ndinotyaira, ndinoisa mari. Ini handina kupfuma, asi handisi murombo. Ndinonakidzwa nekuva noutano hwakanaka uye kuzvimirira. ”
Jerry apfuura nemujenya mumakore ake makumi matatu nemashanu ekurarama ne kuremara. Zvipingamupinyi zvakawanda zvakatarisana naye, asi zvakadaro kusundwa kuburikidza kuva nemaonero akanaka uye kushanda kuburikidza nezvaanogumira. Jerry anoti: “Handitarisiri kuti nyika ititendere. Ndichachinja - zviite kuti ndikwanise kuchinjika. ”
Vanhu ava vadzokororazve hurema uye havana kurega pfungwa yekusagona kumira panyama kuti vapinde munzira yekusimuka nekutarisana nenyika. Nhamo yakaunza zvakanakisa muvanhu ava. Panzvimbo pekugara pane zvavasingakwanise, vanotarisana nemusoro wenjodzi yavo uye vanorarama hupenyu hunofadza, hunogutsa.